Fitness Trainer FitProSport အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
4.92 FREE for Android
4.7 | 1,000,000+ ထည့်သွင်းရန်
ဒေါင်းလုပ် APK（56.6MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Fitness Trainer FitProSport
“ FitProSport” တွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသူတွင် - - အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ရိုးရှင်းသောနှင့်ထိရောက်သောလေ့ကျင့်ခန်း ၂၅၀ ကျော်ပါဝင်ပါသည်။ - လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုစီအတွက်ဖော်ပြချက်နှင့်ကာတွန်းရုပ်ပုံများ - လေ့ကျင့်ခန်းအချို့အတွက်ဗီဒီယို (လေ့ကျင့်ခန်းများစာရင်းတိုးချဲ့လျက်ရှိသည်) )
- အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အိမ်တွင်းသို့မဟုတ်အားကစားခန်းမတွင်လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ရန်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များ - သင့်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းရန်အခွင့်အလမ်း။ မိမိဆန္ဒအလျောက်မိမိကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ပါ။ - လေ့ကျင့်ထားသောလေ့ကျင့်ခန်း၏ရလဒ်များကိုထည့်သွင်းရန်အခွင့်အရေး - သင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏တိုင်းတာမှုရလဒ်များကိုထည့်သွင်းရန်အခွင့်အလမ်း
- supersets နှင့် circuit workout session များနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်း
အချက်အလက်များထပ်တူပြုခြင်း - လေ့ကျင့်ရေးရည်မှန်းချက်ကိုသတ်မှတ်ရန်သို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုထားသောစကားစုကိုထည့်ရန်အခွင့်အလမ်း
- ဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုအတွက်ပုံတစ်ပုံကိုပူးတွဲရန်အခွင့်အရေး - အလင်းရောင်နှင့်အလင်းရောင်နှင့် dark app theme - အသုံးပြုသူပံ့ပိုးမှုစင်တာ - ပုံမှန် application update -
ရိုးရှင်း။ အသုံးပြုရလွယ်ကူသည့် interface
အားကစားခန်းမအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အိမ်တွင်လေ့ကျင့်ထားသောလေ့ကျင့်ခန်းများ။ ။ - သင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အတူ (အရက်ဆိုင်များ၊ အပြိုင်ဘားများ၊ အတက်ဘက်များ၊ fitball၊ burpees များဖြင့်ဆွဲချ) နှင့်အတူ - အတူ dumbbells နှင့် barbells - စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများတွင် - TRX နှင့်အတူ - ရေကူး -
အမြဲတမ်းသင်နှင့်အတူ, « FitProSport »အသင်း
ဘာအသစ်လဲ Fitness Trainer FitProSport 4.92 FREE
- Fixed bugs for Android 11
Fitness Trainer FitProSport | App for Android
Fitness Coach FitProSport | App for iOS
TRAINER Interview Questions And Answers! (How to PASSaTrainer Job Interview!)
Bench Crunches | FitProSport | App for Android & iOS
Fitness Trainer FitProSport 4.90 FREE
Fitness Trainer FitProSport 4.87 FREE
Body Builder Photo Suit (Six pack abs editor)